Ny angona goavana dia nohariana ary angonin'ny orinasa sy ny governemanta amin'ny tanjona hafa ankoatra ny fikarohana. Ny fampiasana izany tahiry izany ho an'ny fikarohana dia mitaky fanarenana indray.
Ny fomba voalohany ahitan'ny olona maro ny fikarohana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika dia amin'ny alalan'ny antsoina matetika hoe angona lehibe . Na dia eo aza ny fampiasana azy io amin'ny ankapobeny, dia tsy misy fifanarahana momba ny angona lehibe. Na izany aza, ny iray amin'ireo famaritana mahazatra indrindra amin'ny angona lehibe dia mifantoka amin'ny "3 Vs": Volombava, Variety, ary Velocity. Am-bava, betsaka ny angon-drakitra, amin'ny endrika isan-karazany, ary miteraka tsy tapaka. Ny mpankafy ny angona lehibe koa dia manampy "Vs" hafa toy ny Veracity sy Value, fa ny mpitsikera sasany dia manampy Vs toy ny Vague sy Vacuous. Raha tokony ho ny 3 "Vs" (na ny "Vs" na ny "Vs"), ho an'ny tetik'asa fikarohana ara-tsosialy, mieritreritra aho fa toerana tsara kokoa hanombohana dia ny "Ws" 5: Iza, inona, aiza, rehefa , ary Nahoana. Raha ny marina, heveriko fa maro amin'ireo fanamby sy fahafahana ateraky ny loharanom-baovao lehibe dia manaraka "W" iray fotsiny: Nahoana.
Tamin'ny vanim-potoanan'ny vanim-potoana, ny ankamaroan'ny angon-drakitra ampiasaina amin'ny fikarohana ara-tsosialy dia noforonina mba hanaovana ny fikarohana. Amin'ny vanim-potoana nomerika, na izany aza, dia be dia be ny angon-drakitra noforonin'ny orinasa sy ny governemanta noho ny tanjona hafa ankoatra ny fikarohana, toy ny famatsiana asa, fampiroboroboana, ary fampiharana lalàna. Na izany aza anefa, olona mahatsapa fa azonao atao ny mamerina indray ny angon-drakitra sy ny governemanta ho an'ny fikarohana. Raha mieritreritra ny fiverenan'ny tantara ao amin'ny toko 1 ianao, tahaka ny nanamafisan'i Duchamp ny tanjona hita mba hamoronana zavakanto, dia afaka mamerina ny angon-drakitra hitadiavana fikarohana ny mpahay siansa ankehitriny.
Na dia tsy isalasalana aza ny fahafahana goavana hanamboarana, ny fampiasana angona tsy noforonina ho an'ny tanjona fikarohana dia manolotra fanamby vaovao. Ampitahao, ohatra, ny serivisy media sosialy, toy ny Twitter, miaraka amin'ny fanadihadian'ny vahoaka malaza, toy ny General Social Survey. Ny tanjon'ny Twitter dia ny manome tolotra ho an'ireo mpampiasa azy sy hahazoana tombony. Ny Fanadihadiana ara-tsosialy ankapobeny, etsy ankilany, dia mifantoka amin'ny famolavolana antontan-kevitra ankapobeny ho an'ny fikarohana ara-tsosialy, indrindra ho an'ny fikarohana an-tserasera. Io fahasamihafana amin'ny tanjona io dia midika fa ny angona namboarin'ny Twitter sy ny fananganana ny Sehatry ny Social Social dia manana toetra samihafa, na dia azo ampiasaina amin'ny fianarana ny hevitry ny besinimaro aza izy ireo. Twitter dia miasa amin'ny ambaratonga haingana sy haingana izay tsy afaka mifanandrify ny fanaraha-maso ny Social Social, fa tsy mifanohitra amin'ny fanadihadiana ankapobeny ny Twitter, fa tsy manara-maso akaiky ny mpampiasa azy ny Twitter ary tsy miezaka mafy ny hihazona ny fitoviana amin'ny fotoana hafa. Satria ireo fahasamihafana roa ireo dia tsy misy dikany ny filazana fa tsara kokoa ny fanaraha-maso ankapobeny momba ny Social Socialite noho ny Twitter na ny mifamadika amin'izany. Raha tianao ny fepetra isaky ny ora manerantany (ohatra, Golder and Macy (2011) ), ny Twitter no tsara indrindra. Amin'ny lafiny iray, raha tianao ny hahatakatra ny fiovana maharitra eo amin'ny fanavakavahana ny toe-tsaina any Etazonia (ohatra DiMaggio, Evans, and Bryson (1996) ), ny General Social Survey no safidy tsara indrindra. Amin'ny ankapobeny, fa tsy manandrana mandresy lahatra fa ny loharanom-baovao lehibe dia tsara kokoa na ratsy kokoa noho ny karazana data hafa, ity toko ity dia hiezaka ny manazava izay karazana fikarohana momba ny loharanom-baovao lehibe manana toetra mahasarika sy izay karazana fanontaniana mety tsy mety tonga lafatra.
Rehefa mieritreritra loharanom-baovao maro dia maro ny mpikaroka dia mifantoka avy hatrany amin'ny angon-drakitra an-tserasera noforonina sy novokarin'ny orinasa, toy ny lozisan'ny fikarohana sy ny media sosialy. Na izany aza, io tanjona mafonja io dia mamoaka loharano roa hafa manan-danja amin'ny angona lehibe. Voalohany, loharanom-baovao maro be dia be avy amin'ny fitaovana nomerika amin'ny tontolo hita maso. Ohatra, ato amin'ity toko ity, dia holazaiko anao ny momba ny fanadihadiana iray izay nanamafisana ireo antontan-dahatsary momba ny supermarket mba hianarana ny fomba fiantraikan'ny mpiasa ny vokatra ateraky ny namany (Mas and Moretti 2009) . Avy eo, any amin'ireo toko taty aoriana, dia holazaiko anao ny momba ireo mpikaroka izay nampiasa rakitra an-tsoratra avy amin'ny finday (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) ary ny famoahana ny angon-drakitra noforonin'ny alàlan'ny herinaratra (Allcott 2015) . Araka ny asehon'ireto ohatra ireto, ny loharanom-baovao lehibe momba ny firaketana dia tsy mihoatra ny fitondran-tserasera fotsiny.
Ny loharanom-baovao manan-danja faharoa izay tsy dia mifantoka amin'ny fitantanana an-tserasera dia ny angonin'ny governemanta. Ireo tahirin-kevitry ny governemanta, izay iantsoan'ny mpikaroka ny firaketana ara-panjakana , dia ahitana ny zavatra toy ny firaketana hetra, rakitra an-tsekoly, ary antontan'isa momba ny statistika (ohatra ny rejisitry ny fahaterahana sy ny fahafatesana). Ny governemanta dia namorona ireny karazana tahirin-kevitra ireny, amin'ny tranga sasany, an-jatony taona, ary ireo mpahay siansa sosialy dia nanararaotra azy ireo efa ho ela raha nisy mpahay siansa sosialy. Ny niova anefa dia ny fametrahana digitalisation, izay nanamora ny governemanta hanangona, handefa, hamahanana ary handinihana ny angon-drakitra. Ohatra, ato amin'ity toko ity, dia holazaiko anao ny momba ny fianarana iray izay nanangona ny angona avy amin'ny metisy dizitaly an'ny governemantan'i New York mba hamahana adihevitra goavana eo amin'ny toekarena momba ny asa (Farber 2015) . Avy eo, any amin'ny toko manaraka, dia holazaiko anao ny fomba nampiasana ny firaketana amin'ny fifidianana ho an'ny governemanta tamin'ny fanadihadiana (Ansolabehere and Hersh 2012) ary ny fanandramana (Bond et al. 2012) .
Heveriko fa ny hevitra momba ny fanarenana dia fototry ny fianarana amin'ny loharanom-baovao lehibe, ary noho izany, alohan'ny hiresahana manokana momba ny fananana loharanom-baovao lehibe (fizarana 2.3) sy ny fomba azo ampiasaina amin'ny fikarohana (fizarana 2.4), tiako mba hanolotra toro-hevitra ankapobeny roa momba ny fananganana. Voalohany, mety halaim-panahy hieritreritra momba ny fifanoheran-kevitra napetrakao aho teo amin'ny antontan-kevitra "nahita" sy "endritsoratra". Efa akaiky izany, saingy tsy marina izany. Na izany aza, amin'ny fijerin'ny mpikaroka, loharanom-baovao lehibe dia "hita", tsy nianjera avy eny amin'ny lanitra fotsiny izy ireo. Ny loharanom-baovao azo avy amin'ny mpikaroka kosa dia nofaritan'ny olona ho an'ny tanjona sasany. Satria ny "finday" rakitra dia noforonin'olona iray, mamporisika foana aho fa hiezaka hahatakatra betsaka araka izay azo atao mikasika ny olona sy ny dingana izay namorona ny angon-drakitrao. Faharoa, rehefa manangona angon-drakitra ianao dia matetika no manampy be loatra ny maminavina ny daty tsara ho an'ny olana misy anao ary avy eo dia ampitahao izany dataset idealy izany amin'ilay fampiasanao. Raha tsy nanangona ny angon-drakitrao ianao dia mety hisy fahasamihafana lehibe eo amin'ny zavatra tianao sy izay anananao. Ny fanamarihana ireo fahasamihafana ireo dia hanampy amin'ny fanatsarana izay azonao atao ary tsy afaka mianatra amin'ny angona misy anao, ary mety hanolotra soso-kevitra vaovao tokony horaisinao.
Raha ny zava-misy iainako, ny mpahay siansa sosialy sy ny mpahay siansa dia mirona amin'ny fanovana amin'ny fomba hafa tanteraka. Ny mpahay siansa sosialy, izay efa zatra miasa miaraka amin'ny angona natao ho an'ny fikarohana, dia matetika manasongadina ny olana ateraky ny angon-drakitra sy ny tsy firaharahiana ny tanjany. Etsy andaniny, ny mpahay siansa momba ny angon-drakitra dia matetika manasongadina ny tombontsoa azo avy amin'ny angon-drakitra raha tsy miraharaha ny fahalemeny. Mazava ho azy fa ny fitsaboana tsara indrindra dia ny hybrid. Izany hoe ny mpikaroka dia mila mahatakatra ny toetra mampiavaka ny loharanom-baovao lehibe-na tsara na ratsy - ary avy eo dia mianatra ny fomba hianarany avy amin'izy ireo. Ary, izany no drafitra ho an'ny ambiny amin'ity toko ity. Amin'ity fizarana manaraka ity dia hilazalaza ireo toetra folo iraisan'ny loharanom-baovao lehibe. Avy eo, ao anatin'ity fizarana manaraka ity, dia hilazalaza ireo fomba fikarohana telo izay afaka miasa tsara amin'ny angona tahaka izany.